वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : विश्वकपमा ब्यस्त:)
जिन्दगीको नीजि दौडधूप र फुटबलको विश्वकप मिसियो भने के हुन्छ? धेरै थोक हुन्छ। हुँदा-हुँदा ब्लगमा लेख्न समेत ढिला हुँदो रहेछ:)
सधैंजस्तो यसपालिको वर्ल्डकप पनि लागेको छ बेस्सरी, लागिराख्या' छ। निद्रा मारिएको छ एक महिना यता र जीऊ खुब बिगारिएको छ। दक्षिण अफ्रिका र जापानको समयको फरकले गर्दा सबै खेल हुँदा यता रात परीसकेको हुन्छ। लिग चरणका केहि खेल साँझको ८ बजेबाट हेर्ने मौका मिलेको थियो। त्यसपछि रातको ११ बजे शुरु हुने खेलहरु पनि हेर्न त्यति अप्ठेरो लाग्दैन तर बिहान ३ बजेबाट शुरु हुने हेर्नचाहिँ साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। लिग चरणका त्यो समयका खेलहरु थोरै हेरियो, 'चुनिएका' मात्रै। कुनै टिम विशेषसंग खासै लगाव नभएपनि फुटबलमा बलिया मानिएका देशहरुको खेल छानेर हेरियो। तर खेल भनेको खेल हो, आफूले चुनेको खेल 'झुर' भैदिने र नचुनेको खेल 'रमाईलो' भईदिने हुन्छ धेरैजसो। नपत्याईएका टिमहरुले अप्रत्याशित राम्रो खेल्दिन्छन्, 'बादशाह' मानिएकाहरु लज्जास्पद हार बोकेर फर्किन्छन्; ब्राजिल, अर्जेण्टिना, इङ्ग्ल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली आदिजस्तै।
सेमिफाईनलबाट त सबै राति ३ बजेपछिका छन्, तर यिनलाई भने छोडिन्न:)
फुटबल र फेसबुकको 'फ्युजन' गरेर चाहिँ खुब रमाईलो भएको छ। प्राय: कोठामा एक्लै बसेर फुटबल हेरेपनि फेसबुकका माध्यमबाट नेपाली फुटबलप्रेमीहरुको भिडमै बसिएको भान भईरहेको छ। अनि लेख्न पनि फेसबुकमा त लेखिएको छ, हल्काफुल्का गफै भएपनि:))
तलको यो 'मुक्तक' फुटबल हेर्दाहेर्दै फुरेको।
खेल नहेरे जगतै खल्लो
साथीभाइका गफमा आफू झल्लो
निद्रा मारी-ज्यान बिगारी पनि हेर्नुपर्ने
हे भगवान किन बनायौ यस्तो डल्लो!
आशा छ, तपाईँ पनि फुटबलको आनन्द लिईरहनुभएको होला, भ्याएसम्म।
अघि भर्खर सकिएको हल्याण्ड र उरुग्वेको सेमिफाईनल खेल पछि फेसबुकमा यस्तो 'स्टाटस' लेखेर बिदा भईयो;
सुन्तला रंगको लुगा किन्नुपर्ला जस्तो छ। सुन्तला रंग लगाउनेको फलिफाप हुने छाँट छ यो पालि:)
फेसबुकमा यो लेख्दा-लेख्दै एउटा जोक सम्झिएँ। त्यो जोकचाहिँ यतामात्रै राख्दैछु।
एउटा मान्छे लुगा पसलमा पसेर पसलेसंग भनेछ; "साहुजी, सुन्तला रंगको भेष्टहरु निकाल्नुस् त हेरौं।"। पसलेले धेरैबेर खोजेपछि चार-पाँचवटा हरिया भेष्टहरु निकालेर भनेछ; "ल हेर्नुस् सुन्तला रंगका भेष्टहरु।"
"मैले सुन्तला रंग भनेको साहुजी, कहाँ हरियो निकालेको?", ग्राहक छक्क परेछ।
"यो पनि सुन्तला रंग त हो नि! यो काँचो सुन्तलाको रंग। पाकेको सुन्तला रंगको भेष्ट रहेनछ, काँचैको रंगले काम चलाउनुस्।", पसले पनि के कम:-)
सबैको जय होस्!
Posted by Basanta at 6:44 AM
Labels: आफ्नै कुरा, खेलकूद, समसामयिक
कृष्णपक्ष July 7, 2010 at 9:36 AM
हे हे रमाइलो पोस्ट, तर यस्तो भोक निन्द्रा नै बिगार्ने त्यो डल्लो भगवान ले नै बनाका हुन् र भन्या ?
Prashanta Shrestha July 7, 2010 at 11:19 AM
यो सानो डल्लो ले गर्दा ठुलो डल्लोमा छरिएर रहेका केहि पुराना साथि भाईहरुसंग फेसबुकमा जम्काभेट भयो l मेरो लागि यतिनै पर्याप्त छ l तर मेरो हार्दिक लगाव रहेको स्पेनको टोलीले विश्वकपको उपाधि चुमे भने मेरा लागि सुनमा सुगन्धनै हुनेछ l जय डल्लो नहोस कसैलाई खल्लो अबत साथि भाईहरुसंग फेसबुकमा संधै हल्लो हल्लो l
archana July 7, 2010 at 12:01 PM
hahahaahahahahah!!!! pet michi michi hase ma ta
kshama July 7, 2010 at 2:45 PM
Ha,ha! Cartoon is really good!
RRijal July 7, 2010 at 5:02 PM
हाहाहा... सुन्तलाको ठट्यौली चाहिँ औधी मन पर्यो ।
ametya July 8, 2010 at 7:47 PM
ha ha ...dai yo dallo vanne chij nai yastai ho....mo:mo ko dallai lai linus na as an eg.
विवेक July 9, 2010 at 12:18 AM
I like it....... :-)
Dilip Acharya July 9, 2010 at 1:17 AM
म चाहिँ विश्वकपमा मस्त मात्रै छु, व्यस्तै भने भा'छैन (आधारात पछिको खेल प्राय: हेर्दिन क्या:)
तर माथीकै मुक्तकमा जस्तै साथी भाइको गफमा आफू झल्लो भइएला भनेर सवेरै उठ्ने बित्तिकै अघिल्लो रातको 'स्कोर' भने हेर्ने गर्‍या छु :)( के गर्नु इज्जत त धान्नै पर्‍यो नि !)।
सूर्य/सिकारु July 9, 2010 at 3:59 PM
समय मिलाएरै भएपनि कुनै खेल छुटाको छैन मैले पनि (हेर्न लायक )। साथिहरुसंग बाजी पनि परेकै छ । अब फाइनलको डल्लो निदरल्याण्ड को गोल पोस्ट मा छिराउनु छ बल गरेरै भएपनि ।
Chaitanya July 9, 2010 at 10:45 PM
सुन्तला त सुन्तला रंग नै हो, तर साइज भने मुन्तलाको मात्रै छ भनेर कसो बच्चाको भेस्ट भिडाएनछ पसलेले !
सत्तालिप्साको मानसिक आधार
सायोनारा जापान!---- अब नेपालबाट
आफ्नै "गुँड" तिर